HealthPort Inosarudza Motio Persona yeCognos Kutendeseka Kufamba - Motio
by arunJun 11, 2013Blog, Cognos Analytics, Cognos Kusimbisa Kwekufamba, chibatiso, Series 7 yekuwana maneja0 mashoko
HutanoPort, masimba pakuteedzana kwemutemo unodzivirirwa, achangosarudzwa Motio nounhu software yekufambisa yavo yeCognos yechokwadi kubva kuChikamu 7 Yekuwana maneja kune Anoshanda Dhairekitori. Verenga zvinotevera chikamu kubva ku HealthPort Mutengi Kubudirira Nyaya kuziva kuti Persona akagadzirisa sei kwavo kuchengetedzeka kwekutama.
Kubva 2006, HealthPort yakashandisa zvakanyanya IBM Cognos kupa inoitisa nzwisiso yezvekuita uye sarudzo sarudzo pamatanho ese ekambani.
Sekambani iri pamberi pekuteerera kweHIPPA, chengetedzo inogara iri chinhu chakakosha.
"Imwe yematanho edu apfuura yanga iri yekubatanidza kunyorwa kwezvakawanda zviripo zvichipesana neyakajairika, inochengetedzwa Active Directory zvivakwa," akadaro Lisa Kelley, Director weFinancial Reporting. "Izvi zvakaburitsa matambudziko akakosha kune edu maCognos mafomu, ayo akaitika kare achipesana neakasiyana Access Manager chiitiko."
Kufanana nevatengi veIBM Cognos, HealthPort yakaona kuti kutamisa kwavo kweCognos kunyorera kubva kune imwechete yekusimbisa sosi kuenda kune imwe kwaizogadzira rakakura basa rebasa ravo reBI uye ekuyedza zvikwata.
"Kubva kufambisa chiitiko cheCognos kubva kune imwe sosi yekuvimbisa kuenda kune imwe kunokonzeresa maCAMID evashandisi, mapoka uye mabasa kuchinja, zvinogona kukanganisa zvese kubva kuzvirongwa zvekuchengetedza uye nhengo dzeboka kuenda kune dzakarongwa kuendesa uye kuchengetedzeka padanho redata," akadaro Lance Hankins, CTO we Motio. "Panyaya ye HealthPort, tiri kutaura pamusoro pesangano rakaisa nguva yakati rebei nesimba mukugadzirisa nekunyatsoongorora mashandiro ezvekuchengetedza ayo anotungamira kunyorera kweBI uye data raanoburitsa."
Mushure mekunyatsoongorora zvavangaite, HealthPort yakasarudza Persona IQ semhinduro yekutama kwavo kubva kuAccess Manager kuenda kuAlex Directory. Persona yakasarudzika uye patent-yakamirira kugona kutamisa mamiriro eCognos pakati pechokwadi sosi pasina kukanganisa maCAMID evashandisi, mapoka uye mabasa akavimbisa kuti ese eHealthPort's Cognos zvemukati, mashedhiyo uye chengetedzo kumisikidzwa yakaramba ichishanda chaizvo sezvaimboita pakutanga.
Verenga nyaya yakazara nezvekuti HealthPort yakabatsirwa sei kubva kuPersona neiyo yavo yeCognos yekuchengetedza chengetedzo.